Ivive APK Dhawunirodha Android [Dzazvino Vhezheni] - Luso Gamer
Ivive APK Dhawunirodha yeAndroid [Yekupedzisira Vhezheni]
Dai 17, 2021 Dai 14, 2021 by Shweta Tripathi
Kunyange zvakadaro mifananidzo yakaunza shanduko muhupenyu hwevanhu. Kubva pakuchengetedza nhoroondo yeiyo yepashure kusvika kune mamakisi endangariro kuyeuka uye kufara nguva yakapfuura. Asi Ivive APK inotora iyo mutambo kusvika kune chitsva chitsva nhanho.
Mifananidzo nemifananidzo zvinotakura zvinoreva zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Kunyangwe kune munhu wega wega, ivo vanopa maonero akasiyana nguva imwe neimwe yavanotariswa. Dzimwe nguva vanotibatsira kutenderera ndangariro dzedu, dzimwe nguva ivo ndivo vega sosi yeruzivo kwatiri, vanotaura nyaya, vanogoverana nguva, uye vanotakura zvakapfuura isu navo.
Nekudaro, munguva ino yeArtificial intelligence uye yakawedzerwa chinhu chinoita kuti ishandure aya manyoro nepfuma kuita chimwe chinhu jaya-kudonha. Kana iwe uchida, tora chete iyo Ivive App yefoni yako yefoni Android kana piritsi yemahara kubva pane ino peji.
Chii chinonzi Ivive APK?
Ivive chishandiso chinopa kutarisa kutsva uye kufungidzira kune iyo mifananidzo yatiri kutarisa. Inoita izvi feat otomatiki nekushandisa augmented chaiyo. Izvi zvinogadzira chinoshamisa chinzvimbo chitsva kumanzwiro uye zvinoonekwa zvemufananidzo, nekuwedzera zvinoshamisa mifananidzo.
Saka sei usipe hupenyu kune edu mifananidzo. Chero pese patinovatarisa ngavatitore kupfuura izvo zvatingafunge nezvokushandisa uropi hwedu. Kana isu tashandisa fungidziro yedu, ngativei yakatendeka, ine painogumira. Hatisi isu tese tiri maPassassos kana Van Goghs.
Izvo zviri kutaurwa. Saka ko kana isu tikasakwanisa kuva vanofungidzira sevanyori veAvatars kana ivo vakakurumbira maartist. Tinogona kushandisa tekinoroji kutiitira icho isu.
zera 31.13 MB
Package Zita com.ivive
Uye kana iwe uchiziva nezvechokwadi chakawanikwa iwe unogona kuziva kuti zvine simba rakadii munzira yedu yekuona nekuona nyika.
Ivive App ine simba rese iro rinodikanwa kutora iko kuiswa kune imwe nzira kupfuura kugona kwevanhu. Kana iwe usina chokwadi izvo zvatiri kutaura nezvazvo. Tarisa programu yacho pachako nekuishandisa iyo pane yako Android kifaa.
Inosangana nenyika yepasi ichiri kutora mifananidzo uye mifananidzo nenzira itsva. Wona ichitenderera uye kutevedzera hupenyu munzira itsva, dzinotyisa, uye dzisingatarisirwi.
Paunenge uchinge wagadzira unoshamisa wekupopota nemufananidzo wako waunofarira, inguva yekugovana neshamwari dzako kana pawa media media kuti unonhore vateveri vako.
Nzira yekuDhaunirodha Ivive APK?
Kuti uwane iyi inoshamisa app pane yako smartphone ingo tevera matanho pasi.
Kutanga, enda kune yekuburitsa link pazasi uye tora Download APK bar
Enda kune chengetedzo yemuchina kana wapedza kuita download uye uwane faira racho.
Tinya pairi kuti utange kuisirwa
Ita kuti sarudzo yeUsazivikanwe sarudzo kubva kumasethingi efoni
Tinya mashoma kupfuura uye ipapo iwe uripo.
Iwe zvino unogona kutsvaga iyo Ivive APK pane gadget screen uye tora kuti uvhure. Iye zvino iwe unogona kuwedzera iyo mifananidzo uye kuona mashiripiti. Chinhu chimwe chete chinofanira kucherechedzwa kuti hachizoshande nemifananidzo yese. Iko kushanda kunogumira kune mifananidzo iyo iyo programu inokuudza iwe nechiratidzo chechiratidzo.
Chinhu chakafanana newe:
Ivive APK ndiyo nzira inotyisa yekutarisa mifananidzo mune inoveli nzira. Nekubatsirwa kweiyo chaiyo yakagoneswa, inokupa iwe chiitiko chitsva chinoshamisa. Kuti unakirwe iyi yakasarudzika app neakazara mapaki ingowana iyo faira nekutapa iyo yekuburitsa link yeiyo Android yako.
Categories Apps, Entertainment Tags Ive APK, Ivive App Post navigation
Movidy Apk Dhawunirodha Yekushandisa Android [Varaidzo Yekushandisa]
Technical King VM APK Dhawunirodha yeApple [PUBG Virtual]